၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ? - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?0154
Usman Ghani October 23, 2020 8:52 am November 3, 2020
၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပလာခဲ့တာဆိုရင် ဒီနှစ်မှာတော့ သုံးကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop 11.11 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Single dayအဖြစ်လူသိများကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး online shopping ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alibaba ဟာအွန်လိုင်းမှ အကြီးစားအွန်လိုင်းရောင်းချမှုကို ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ Shop.com.mm ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Alibaba မှ အပြီးတိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Shop MM မှာလဲ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုစတင်ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်။
Previous ArticleWhat is 11.11 The World’s Biggest Sale 2020?Next Article၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?